Fiidiyowgii ugu horreeyay ee filimka Cherry ee Tom Holland iyo walaalaha Russo | Waxaan ka socdaa mac
Mid ka mid ah mashaariicda ugu xiisaha badan ee imaan doona Apple TV bilaha soo socda waa filim Cherry ah Jilaaga Tom Holland (Spiderman-kii ugu dambeeyay ee filimka Marvel) oo uu hagayo Joey Anthony Russo (oo loo yaqaan walaalaha Ruushka iyo Avengers: Endgame halkaas oo wareegii ugu horreeyay ee adduunka Marvel ku dhammaaday).
Filimkan cusub wuxuu na tusayaa sheekada askari rWaxaa laga soo daayay dagaalka la socda cillad maskaxeed kadib oo u qabatimay opiates inuu hadhow galo daroogo adag, isaga oo ku qasbaya inuu raadsado qaab uu ku bixiyo deynta uu qaadaayo, dhaca bangiga oo ah xalka ugu fiican.
Waxaan jeclaan laheyn inaan kuu soo bandhigno Cherry ... pic.twitter.com/E8otgzSvWp
- Walaalaha Russo (@Russo_Brothers) January 9, 2021
Cherry, oo imanaya Apple TV + Maarso 12, inkasta oo ay imaaneyso 2 todobaad kahor tiyaatarada Mareykanka (ma ogin hadii ay imaaneyso tiyaatarada wadamada kale). Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay iibsatay xuquuqda filimkan bishii Sebtember ee sanadkii hore, iyadoo ku saleysan iibiyaha ugu fiican ee Nico Walker oo isku magac ah.
Sida ay sheegeen walaalaha Russo wareysi ay siisay majaladda Variety
Waxaan u maleyneynaa inuu yahay filim epic, waana safarka nolosha qofka. Laakiin waxay leedahay xoogaa shakhsiyad ah oo udhaxeysa inay ahaato daraasad dabeecad iyo wareeg nololeed.
Filimku wuxuu u qaybsan yahay lix cutub oo ka turjumaya xilliyadaas kala duwan, mid walbana wuxuu leeyahay dhawaq gooni ah. Waxaa lagu toogtay muraayadaha indhaha oo kala duwan, oo leh naqshado wax soo saar oo kala duwan. Waxaad leedahay xaqiiqo sixir ah. Cutub kale ayaa caqli xumo ah. Midkale waa cabsi. Waxoogaa jacayl ah ayaa ku jira. Waa cufan tahay codkeeda. Isagu waa dabeecad dhibaato jirta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Fiidiyowgii ugu horreeyay ee Tom Holland iyo filimka walaalaha Russo ee Cherry